IVisa yaseIndiya kwi-Intanethi (i-e-Visa yaseIndiya) | Ukuba bucala
Umgaqo-nkqubo wethu ujolise ekubeni ube lula kubathengi. Umbutho wethu uvulekile malunga nomgaqo-nkqubo wokuqokelela ulwazi. Siyicacisile into yokuba siqokelela iinkcukacha zobuqu, ukuba ziqokelelwa njani kwaye zisetyenziswa njani.
Indlela esiyiqokelela ngayo inkcukacha zobuqu ichonga umntu ade agqitywe ukwenza isicelo seVisa kwaye iziphumo zimisiwe.
Ngokusebenzisa le webhusayithi, uyavuma ukuba uMgaqo-nkqubo wabucala kunye nemigaqo yawo kunye neemeko zawo. Sigcina imigangatho ephezulu kwimveliso ukukhusela ulwazi lwakho, olu lwazi aluzange kwabelwane ngalo, okanye lithengiswe ngalo alinikwanga naliphi na iqela.
Ulwazi lobuqu oluqokelelwa sithi
Ngexesha lokufaka kwesicelo kufuneka siqokelele le ngcaciso ilandelayo:
Ulwazi oluqulathwe kwiphepha lebhayiloji yencwadana yakho yokundwendwela
Ulwazi olunxulumene nobudala bakho, iinkcukacha zosapho, iqabane kunye nabazali
Ifoto yakho yobuso
Ikopi yakho yokundwendwela scan
Ukuba uza visa eliza kunyangwa, ke ulwazi oluhambelana nenkqubo yakho yonyango
Ukuba uza ne-visa yeshishini, ke ulwazi malunga nombutho wase-Indiya uyatyelelwa
Usompempe kwilizwe lakho
Ukufika kwemihla yamaNdiya kunye neenjongo zokundwendwela
Idatha yobuqu ebonelelwe nguwe
Usinika olu lwazi ukuze luqhubekeke ngempumelelo. Amagosa ajongene nokufudukela kwelinye ilizwe aqeshwe nguRhulumente wase-India afuna olu lwazi ukuba luzalise imeko yangasemva kwaye luthathe isigqibo ngeVisa yakho e-India ngokuxhomekeke Uhlobo lweVisa lwaseIndiya ifunwa nguwe. Qaphela ukuba ukhetho lokuphela kwesigqibo luxhomekeke kubaphathi abachaphazelekayo kunye noRhulumente wase-India. Asinakuze, okanye nawuphi na umthetheleli anelungelo okanye enze naziphi na izithembiso kwisiphumo se-Isicelo seVisa yaseIndiya.
Xa abafaki zicelo babonelela ngale ngcaciso kule webhusayithi apha Ifomu yesicelo seVisa yaseIndiya Olu lwazi lugcinwe kukhuseleko olugcinwe ngokufihliweyo kwiziko ledatha eligcinwe kwimigangatho ephezulu kunye nobume bokhuseleko lobugcisa olukhuselweyo. Senza zonke iinzame zokulandela iindlela ezilungileyo zeli shishini ukukhusela ulwazi olunikezwe nguwe.
Siqokelela le ngcaciso ilandelayo nguwe eyaziwa nguwe kwaye siphathwe nathi ngokuzithemba okungqongqo. Sikwalujonga olu luhlu lolwazi njengolubuthathaka kakhulu. Olu hlobo lolwazi lubandakanya, imvelaphi yakho yolwaphulo-mthetho, igama lakho lokuqala, igama eliphakathi, igama losapho, igama labazali, iinkcukacha zomlingane, imeko yomtshato, ukufota ubuso, ikopi yokundwendwela, isalathiso kwilizwe lakho kunye nesalathiso eIndiya. Ukongeza, iinkcukacha zakho zokuhamba, imihla yokufika kunye nokuhamba usuka e-India, isini, ubuhlanga, izibuko lokufika e-India kunye nolunye ulwazi olunokwenzeka njengoko kufunwa ngamaGosa okuFudukela kuRhulumente wase-India nawo ayacelwa emva kokuba ugqibile Indian Visa ekwi-Intanethi kule webhusayithi.
Isinyanzeliso soXwebhu loXwebhu
Singacela la maxwebhu alandelayo kwi-best kaRhulumente wase-India ngenjongo zokukunceda ufumane i-an I-Visa yaseIndiya. Olu xwebhu kufuneka lube nemfuneko yokwenza ukuvunywa okuyimpumelelo kwesicelo sakho seVisa yaseIndiya. Singawafuna kwaye siwacele la maxwebhu alandelayo, kodwa kungaphelelanga apho: ipaspoti yakho yesiqhelo okanye uxwebhu lokuhamba, nayiphi na i-ID yesithombe, ikhadi lakho lokuhlala, ubungqina bomhla wokuzalwa njengesatifikethi sokuzalwa, ikhadi lakho lokundwendwela, incwadi yesimemo, ubungqina bemali isatifikethi samapolisa sokulahleka kwepaspoti kunye naziphi na iincwadi ezigunyaziswe ngumzali. Olu xwebhu luceliwe ngenjongo yokwenza iziphumo eziphumelelayo kuhambo lwakho oluya eIndiya.
URhulumente wase India ufuna olu lwazi kuye I-eVisa yamaIndiya Unokugqitywa ngenkqubo yokwenza izigqibo enolwazi nokuba awubuyiswanga ngexesha lokukhwela okanye ngexesha lokungena eIndiya.
Sinelungelo lokusebenzisa ulwazi olunxulumene neqonga lethu lohlalutyo lwe-Intanethi elinokuqokelela ulwazi olunxulumene nesikhangeli esisetyenzisiweyo apho sinokuthi sinikeze eyona nkonzo ilungileyo kuzo zonke iziphequluli ezisetyenziswa ngoku, indawo ovela kuyo ukuba sinokuba nakho ukwenza umxholo wokuqulunqa abaphulaphuli bethu, uhlobo lwesixhobo esisetyenziswayo ukwazisa umgaqo-nkqubo weqhinga lobugcisa.
Siqokelela ulwazi olufana nenkqubo yakho yokusebenza ngeenjongo zokuphucula iwebhusayithi kunye nedilesi ye-IP ukusikhusela kwimisebenzi emibi kunye nokwala inkonzo. Sigcina umthengi embindini womgaqo-nkqubo wethu wohlalutyo ukuze amava angcono kunye aphuculweyo anganikezelwa Indawo yaseburhulumenteni yaseIndiya yeVisa.
'Indlela' yokusetyenziswa kolu lwazi lomntu oqokelelweyo
Ulwazi lobuqu ekubhekiselwe kulo kulo mgaqo-nkqubo wabucala Ifomu yesicelo seVisa yaseIndiya iya kusetyenziswa kwezi ndlela zilandelayo, kodwa ingaphelelanga:
Ukuqhubekiswa kwesicelo seVisa yaseIndiya
Eyona njongo yokuqokelelwa kolu lwazi kukukwazi ukusebenza Isicelo seVisa saseIndiya. Olu lwazi kwabelwana ngalo nabasemagunyeni oRhulumente waseIndiya ukuze babenakho ukwenza isigqibo kwaye bafike kwisiphumo sakho Isicelo seVisa saseIndiya.
Abasemagunyeni boRhulumente waseIndiya banokuthatha isigqibo sokuba basivume isicelo sakho okanye basale isicelo sakho kwaye banelungelo lokuthetha nelokugqibela.
Unxibelelwano lomenzi wesicelo
Ulwazi oluqokelelweyo lusetyenziswa kuthi ukuze sikwazi ukunxibelelana nabafaki-zicelo iziphumo zesimo seVisa yaseIndiya. Sikwafuna ukunxibelelana ngexesha lakho Inkqubo yeNkqubo yeVisa yaseIndiya naluphi na ulwazi olongezelelekileyo olufunwa nguRhulumente wase-India ukuze akwazi ukwenza isigqibo. Ezinye zezi zizathu inokuba kukujonga ukuba ngubani oyena mntu ubhekise kwelaseIndiya, okanye yeyiphi ihotele oza kuhlala eIndiya, okukhapha kunye nenjongo ephambili yohambo lwakho.
Kufuneka sakwazi ukunxibelelana ngempumelelo nawe ngokubhekisele kwiziphumo zesicelo sakho, nasiphi na isimo, siphendule ngokuphendula, siphendule nakuphi na ukuthandabuza kunye nokucacisa. Nceda uqaphele ukuba asabelana ngeenkcukacha zakho kunye neminye imibutho yoodade okanye naziphi na iinjongo zokuthengisa.
Inkqubo yeNkqubo yeVisa yaseIndiya
Sisebenza ngenkuthalo ukuphucula amava abathengi, ngoko ke lonke ulwazi oluqokelelweyo nolungazichongi ngokwalo luqokelelwa ngenjongo yokuphucula amava omsebenzisi kunye nokunikezelwa okungcono kweemveliso kubathengi. Ukuphucula amava omsebenzisi, kufuneka sazi ulwazi oluthile kwaye siluhlalutye kusetyenziswa isoftware eyahlukeneyo kunye nenkqubo yokwenza izigqibo ukuphucula ukuhanjiswa kwesoftware kunye ne-intanethi umzila wabathengi bethu. Iqonga lethu elikwi-Intanethi, iinkonzo zethu kunye nokuhanjiswa kwethu kunye nokuzibophelela kumakhonkco abathengi ekuqokeleleni kolu lwazi. Siyazingca ngokubonelela nge portal elula kunye neyona ilula eIndiya Visa Online yabasebenzisi kwihlabathi liphela. Eli qonga lehlabathi lenze inguqu ekunikezelweni kweVisa ye-Indiya kwihlabathi. Siyinkokeli yehlabathi ekuziseni i-eVisa ye-Indiya kwihlabathi liphela njengoxanduva olukhulu lokuphila kulindelo lwabasebenzisi kumazwe ali-180.
Sisebenza ngaphakathi kwesakhelo somthetho semibutho eyahlukeneyo karhulumente kwaye kufuneka sithobele imithetho, imithetho, imigaqo kunye nemigaqo. Singaphicothwa, sinakho ukuqhubeka nomthetho, okanye uphando. Ke ngoko, sinokuba phantsi kwesibophelelo somthetho sokwabelana ngale ngcaciso ukuhambelana nomyalelo wenkundla okanye imicimbi yomthetho.
Esinye isizathu sokusetyenziswa kolu lwazi
Singalusebenzisa olu lwazi ukuqinisekisa ukuba imiMiselo neMiqathango yethu iyathotyelwa kunye nokunyanzelwa koMgaqo-nkqubo weKuki. Kufuneka sizikhusele kuwo nawuphi na umsebenzi wobuqhophololo kwaye singalusebenzisa olu lwazi.
Ukwabelana ngolwazi lomntu
Ulwazi lwakho alwabelwanga naye nawuphi na umntu wesithathu, inkxalabo yoodade, umlamli okanye nayiphi na umbutho wentengiso. Iimeko kuphela apho olu lwazi lomntu wabelana ngalo luchazwe ngezantsi:
Ngorhulumente wase India okanye abanye oorhulumente
Kufuneka sinikezele ngolwazi lwakho kwiGosa lezoMfuduko loRhulumente waseIndiya, ukuze isicelo sakho seVisa yaseIndiya sithathwe isigqibo. Ngaphandle kolu lwabiwo lokwabelana ngolwazi, akuyi kubakho siphumo kwi-eVisa yakho yaseIndiya. URhulumente waseNdiya kufuneka asebenze kwiiVisa zamaNdiya kwaye uyakuza nesigqibo ngokuvunywa / ukuvuma okanye ukurhoxa / ukurhoxiswa kweFomu yakho yesicelo seVisa yaseIndiya rhoqo ngaphakathi kweeyure ezingama-72 zokufaka isicelo, okanye kwiintsuku ezi-3.
Uxanduva olusemthethweni ngokwabelana ngolwazi
Xa ufaka isicelo seVisa yaseIndiya ku-https: //www.india-visa-online.com uyavuma ukuba nanini na xa umthetho usifuna ukuba sichaze iinkcukacha zakho kwabasemagunyeni, siya kuba phantsi koxanduva olusemthethweni. Le mithetho kunye nale migaqo inokuba se-India okanye kwamanye amazwe angaphandle kwendawo yokuhlala i-India Visa sicelo.
Kufuneka sinyanzelise iMigaqo neMiqathango yethu, ke ngoko kusenokufuneka sisebenzise olu lwazi lobuqu ukukhusela amalungelo ethu okanye ukuphendula kumagosa karhulumente abasemagunyeni kuRhulumente, ukuthobela iinkqubo zenkundla, ukubambelela kwiinkqubo zomthetho, kunye nokukhusela ubuhlakani bethu. Ipropathi, ukukhusela ilungelo lethu, ukulandela ikhondo lezomthetho kunye nokunciphisa okanye ukunciphisa umonakalo esinokuthi siwungene.
Ulawulo loLwazi lomntu kunye nokucinywa
Unelungelo lokulibaleka ngokuhambelana nokuthotyelwa kwe-GDPR kunye nelungelo lokucela ukuba sicime ulwazi lwakho. Nalu naluphi na ulwazi esiluqokelelayo kuwe lwenziwe ngombane ngokuxhomekeka kwisicelo esivela kuwe. Unokuqaphela ukuba asikwazi ukucima olo lwazi lufuneka ngokusemthethweni kuthi phantsi kwesibophelelo esisemthethweni okanye sonyanzelwa ukuba sigcine phantsi komthetho ngazo naziphi na izizathu ngaphandle kokuchazwa kwezo zizathu.
Ukugcinwa kwedatha kweli qonga
Ukufihlwa kwedatha, amaqhosha e-cryptographic kunye neyona nto ibalulekileyo yezenzo zokhuseleko zovavanyo kubandakanya i-OWASP ephezulu 10, isixhobo sewebhu firewall sisetyenziswa kuthi ukunciphisa ukubiwa, ilahleko okanye ukusetyenziswa gwenxa kolwazi lwakho. Sinolawulo olucocekileyo lweendawo ezikhuselekileyo endaweni yokuqinisekisa ukuba ulwazi lwakho lomntu aluguqulwa, luphicothwe kwaye luyalandeleka. Sineendlela zokhuseleko ezibekwe kuwo onke amanqanaba enkqubo ukusuka kwisicelo ukuya kwiziko ledatha ukuqinisekisa ukuba akukho siphazamiso nokulungiswa kolwazi lwakho kunokwenzeka ngaphandle komkhondo wophicotho-zincwadi nokuba kuphela ngabasebenzi bezokhuseleko abathembekileyo abanokufikelela kolu lwazi.
Sine-software esekwe kulawulo lwesoftware kunye nolawulo lokhuselo lomzimba kwindawo ukukhusela olu lwazi. Naluphi na ulwazi olungafanelekanga luyasuswa kuthi ngokomgaqo-nkqubo wokugcinwa kwesoftware yethu. Unokusibuza ngomgaqo-nkqubo wethu wokugcina idatha.
Ulwazi lwakho lungagcinwa ukuya kuthi ga kwiminyaka emihlanu njengoko kufuneka ngokomthetho wokugcina iirekhodi kunye nomgaqo-nkqubo wokugcina iinkcukacha. Kufuneka sibambelele kwimithetho eyahlukeneyo kwaye sisebenze phantsi kwesakhelo somthetho.
Nceda ungayenzi loo nto xa usenza isicelo I-India Visa kwi-IntanethiKuyimbopheleleko yakho ukuqinisekisa ukuba iPC yakho okanye ifowuni ephathekayo ikhuselekile ukuyisebenzisa. Ukuba inkqubo enobungozi ifakwe kwisixhobo sakho ngoko asiyi kuba nakho ukukhusela ulwazi lwakho. Siqinisekisa ukuhanjiswa okubhaliweyo kolwazi lwakho. Idatha ibhalwe ngokufihlakeleyo ekuphumleni nasekuhambeni kwi-eVisa yakho yaseIndiya maxa onke naphakathi kwecandelo ngalinye lesoftware kubandakanya kwiPC yakho kwiwebhusayithi yethu https://www.india-visa-online.com naphakathi kwecandelo ngalinye lesoftware ngasemva .
Ukulungiswa kunye notshintsho kulo Mgaqo-nkqubo wabucala
Umgaqo-nkqubo wethu wezomthetho, iMigaqo neMiqathango yethu, ukuphendula kwethu kwimithetho kaRhulumente kunye nezinye izinto ezinokusinyanzela ukuba senze utshintsho kule Mgaqo-nkqubo wabucala. Luxwebhu oluphilayo nolitshintshayo kwaye singenza utshintsho kulo Mgaqo-nkqubo wabucala kwaye sinokuthi okanye sikwazise ngotshintsho kulo mgaqo-nkqubo.
Utshintsho olwenziwe kulo mgaqo-nkqubo wabucala lusebenza kwangoko xa kupapashwa eli polisa kwaye ziqala ukusebenza ngoko nangoko.
Luxanduva lwabasebenzisi ukuba wazisiwe ngalo mgaqo-nkqubo wabucala. Xa ugqiba Inkqubo ye-Visa yaseIndiya, sikucelile ukuba wamkele imiMiselo neMiqathango neMigaqo-nkqubo yethu yabucala. Unikwa ithuba lokuba ufunde, uphonononge kwaye usinike ingxelo yoMgaqo-nkqubo wethu wabucala ngaphambi kokungenisa isicelo kunye nentlawulo kuthi.
Singaqhagamshelana kwa Qhagamshelana nathi. Siyayamkela ingxelo, iingcebiso, iingcebiso kunye neenkalo zokuphucula kubasebenzisi bethu. Sijonge phambili ekwenzeni ukuphuculwa kweyona qonga lilungileyo kwihlabathi ukuze kufakwe isicelo se-Visa ye-Indiya yaseIndiya.
Nceda uqaphele ukuba ukubonelela ngeengcebiso zokufudukela kwelinye ilizwe kufuna ilayisensi okanye imvume kumagunya achaphazelekayo Sisebenza egameni lakho kwaye sifaka isicelo sakho emva kokutshekishwa kwengcali, asikuboneleli ngeengcebiso ngokufuduka kulo naliphi na ilizwe kubandakanya neIndiya kwisicelo sakho seVisa.